Liibiya oo badbaadisay tahriibeyaal Soomaali ah. - Wargeyska Faafiye
Liibiya oo badbaadisay tahriibeyaal Soomaali ah.
Saraakiisha dowlada Liibiya ayaa sheegay in ciidanka ilaalada xeebaha ee dalkaas in ay shalay badbaadiyeen 107 qof oo tahriibeyaal Soomaali ah, kaddib markii doontii ay saarnaayeen ay ku dhowaatay in ay gaddoonto.
Toddobo qof oo ka tirsaneyd muhaajiriinta Soomaalida ah ayaa geeriyooday markii lagu tuuray badda si looga hortago doonta in ay quusto.
Col. Ayuub Qaasim oo ka mid ah saraakiisha ciidamada badda ee dalka Liibiya ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in tahriibeyaasha oo lagu arkay meel dhowr meyl u jirta xeebta magaalada Tripoli ay isugu jireen rag, dumar iyo carruur.
Muhaajiriinta Soomaalida ah waxay doonta ka raaceen xeebaha dalka Liibiya, waxayna ku sii jeedeen qaaradda Yurub.
Badda u dhexeysa dalalka Liibiya iyo Talyaaniga ayaa waxaa ku dhintay tahriibeyaal badan oo Soomaali ah oo ka soo cararay dagaallo iyo nolol-xumo ka jirta dalkooda.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsMuslim teenager 'judged by Heathrow Airport staff'Donors meeting in London pledge more than $300 million for Somalia to aid in security, justice.Egyptian court orders death sentences over anti-Islam film.Dib u dhac ku yimid shirkii dastuurkaQM oo cambaaraysay weerarkii ismiidaaminta.